Daawo: Faroole oo meel Adag iska taagay Ansixinta Golaha Wasiirada cusub ee Somalia iyo Mowqifkiisa ku aadan. | Entertainment and News Site
Home » News » xogwaran » Daawo: Faroole oo meel Adag iska taagay Ansixinta Golaha Wasiirada cusub ee Somalia iyo Mowqifkiisa ku aadan.
Daawo: Faroole oo meel Adag iska taagay Ansixinta Golaha Wasiirada cusub ee Somalia iyo Mowqifkiisa ku aadan.
daajis.com:- Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole Madaxweynihii Hore ee Maamulka Puntland ayaa si qalbi furnaan ah uga hadlay arrinta ku aadan Khilaafka ka dhashay asixinta Golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya.
Faroole oo hadda ku sugan Australia ayaa lasoo xiriiray saxaafadda Soomaaliya, wuxuuna bixiyey wareysi qiimo badan oo uu ku dalbaday in si deg deg ah loo ansixiyo golaha wasiirada.
“Dadka Baarlamaanka waxaan u gu baaqaaya odey Soomaaliyeed ahaan, xubin aqalka sare oo baarlamaan ku jira ahaan, oo aan hada maanta idinla joogin, Waxaas hada aan maqmaqlayo yaan ummada aduunka idinla yaabin, dadka soomaaliyeed ee wax kala garanaya idinla yaabin” ayuu yidhi Faroole oo la hadlay saxaafadda.